प्रियंकाको ‘कान्स फेस्टिभल’मा जिपर बिग्रिएपछि… – News Nepali Dainik
प्रियंकाको ‘कान्स फेस्टिभल’मा जिपर बिग्रिएपछि…
प्रकाशित मिति: शनिबार, माघ १७, २०७७ समय: ८:२९:५१
कुनै इभेन्ट, अवार्ड अथवा विवाहलगायतमा प्रायः फिल्मका कलाकारहरु ‘उप्स मुमेन्ट’को शिकार बन्छन् ।
कैयौं पटक उनीहरुको ‘उप्स मुमेन्ट’लाई क्यामरामा कैद पनि गरिन्छ । केही अभिनेत्रीहरु भने यस्तो घटनामा क्यामराबाट जोगिनका लागि आफूलाई सम्हाल्छन् । तर सोच्नुहोस् कि विश्वकै प्रतिष्ठित फेस्टिबल ‘कान्स’मा पुगेर रेड कार्पेटमा हिँड्दा कथमकदाचित तपाईंको जिप फुट्यो भने यस्तो अवस्थामा तपाईंको हालत के होला ?
बलिउडदेखि हलिउडमा आफ्नो अभिनय कलालाई विस्तार गरिसकेकी बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडाले सन् २०१७ ‘कान्स फिल्म फेस्टिभल’मा यस्तै अवस्था भोग्नुपर्यो । उनी रेडकार्पेटमा जाने तयारी गरिरहँदा विश्वभरका क्यामरा उनको फोटो लिनका लागि तेर्सिएका थिए । तर रेडकार्पेटमा उत्रनासाथ उनको लुगाले धोका दियो ।
प्रियंकाले इन्स्टाग्रामा फेस्टिभलको समयको केही तस्बिरको कोलाज शेयर गरेकी छन् । ‘यहाँ म बाहिरबाट भलै पिरो देखिएकी हुँला । तर केही मानिसलाई मात्र थाहा थियो कि यो बेला म कति डराएकी थिएँ । रेड कार्पेटमा जानु केही अघि मेरो विन्टर गाउनको जिपर बन्द गरिरहँदा टुटेको थियो । समाधान ? मेरो सहयोगीले कार भित्र ५ मिनेटमा मेरो लुगा सिलाएर दिएकी थिइन्’, प्रियंकाले क्याप्सन लेखेकी छन् ।
प्रियंकाले आफू यस्ता पर्दा पछाडिका रोचक कुराहरु फ्यानमाझ बाढिरहने उल्लेख गरेकी छन् । प्रियंकाको किस्सालाई पञ्जाबी गायक तथा ‘बिग बोस १३’ फेम हिमांशी खुरानाले पनि आफ्नो इन्स्टाग्राम स्टोरीमा शेयर गर्दै आफूमाथि पनि यस्तो आपत आइलागेको उल्लेख गरेकी छन् ।
Last Updated on: January 30th, 2021 at 8:29 am